Tontolo: Miaro ny Zon’Olombelona amin’ny alàlan’ny videon’olon-tsotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2010 8:36 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, Italiano, Français, 繁體中文, 简体中文, македонски, বাংলা, English
Ny famokarana video ho fiarovana ny zon'olombelona dia mety hifototra sy tahotra hanohina ny zony any amparany ho an'ireo olona miseho na mandray anjara amin'ilay video. WITNESS’ The Hub dia mizara amintsika ny fomba ahazoantsika mamokatra video fiarovana ny zon'olombelona ampitàna hafatra no sady manakely ny mety ho fiantraikany amin'ireo rehetra tafiditra amin'izany.
Ny lahatsoratra Protecting yourself, your subjects and your human rights videos on YouTube [ Fiarovan-tenanao, ny mpandray anjara ary ireo zo maha-olona anao anaty video] nataon'i Sameer Padania avy amin'i WITNESS sy Steve Grove avy amin'ny YouTube, dia ahitàna ny fanentanana manaraka toy izao izay milaza ny tena votoatin'ireo dingana arahana mba hiarovana ireo mpandray anjara alohan'ny hanapahan-kevitra hamokatra video hiarovana ny zon'olombelona.
Singa iray isan'ny tena mavesa-danja indrindra ny resaka fiarovana an'ireo olona asongadinao ao anatin'ilay video amin'ny alalan'ny fahazoana ny faneken-dry zareo:
Fahiny, azon'ireo mpamokatra video natao ny manivana ny habeny sy ny hoe iza no afaka mahita azy, saingy amin'izao fotoanantsika izao tsara ny mahalala fa raha ampakarina anaty aterineto ny video iray miresaka zon'olombelona, fotoana no andrasana dia hahita azy iny koa ireo kinendriny. Noho izany dia tsara ny maka ho fahazarana ny maka ny fanekena amin'ireo olona alainao sary. Midika izany fa atao fantatr'izy ireo ny mety ho voka-dratsyin'ny fisehoany ao anatin'ny video-nao. Azonao atao ihany koa ny manao izay hampanjavozavo na manafina ny endrika, mba hampananosarotra ny fahafahan'ny manampahefana mamantatra ny momba ilay olona na ny toerana misy zy. Zava-dehibe io: ny manampahefana tao Burma, ohatra, dia nampiasa ny andiantsary avy amin'ny aterineto nisy ireo mpanao fihetsiketsehana mba hamantarana sy hisamborana ireo mafana fo.
Ao anatin'ilay lahatsoratra, nasian-dry zareo ohatra ny amin'ny hoe fomba ahoana no atao hanafenana ny maha-izy azy ny olona iray, izay mety ho nampiasana ny teknolojia avo lenta (mampiasa rindrambaiko) na izay tsotra indrindra (mampiasa ny hazavana ‘contre-jour’, ohatra).
Amin'ireo video ao amin'ny andiany WITNESS dia misy lohahevitra toy ny Filming, Audio & Using Cellphones [Fakàna sary, Feo & Ampiasana ny finday, Filming & Protecting Interviewees [Fakàna sary & Fiarovana ireo olona hadihadiana] sy indrindra indrindra ny hoe ahoana no hananganana sy hanapariahana ny video-nao [Editing and Distributing Your Film].
Zavatra iray tokony hatao foana ao an-doha ny hoe ahoana no hamokarana tantara iray avy eo an-toerana saingy hanana ny toerana manerana ny tontolo, ary ilay poety sy mpanoratra Kwame Dawes ao amin'ity video ho an'ny YouTube's Project: Report ity dia miresaka momba ny fisarihana ny olona hifantoka amin'ny tantara tianao hampitaina:
Resaka iray isan'ny nasongadina tao amin'ny lahatsoratry ny WITNESS koa ny hoe ahoana no fomba hanapariahana ny lahatsary mba hahazoana ny vokatra andrasana: raha ilaina ny mikendry vokatra midadasika kokoa (manerantany) na aleo mitazona ilay video ho ao anatin'y sehatra anatiny saingy mampiseho izany amin'ireo mpandray anjara fototra afaka mandray fepetra momba ny zon'olombelona anton'ny resaka. Fa koa, nisy ala sakana vitsivitsy natolotra izay hialàna amin'ny fandokoana an'ireny video ireny ho tsy dia mifandraika loatra , mampiasa teny fototra mazava manondro ireo video sy manome famaritana manampy fanazavana araka izay tratra, maka ny fanekena avy amin'ny rehetra hita ao anatin'ny video mba tsy hahafahan'ireo manamarika azy, mahalala ny lalàna eo an-toerana manodidina ny lalàna voakasika lohahevitra voafaritra na izay aseho ao amin'ilay video, mahatakatra ny zon'ny mpamorona mba tsy ho voamarika noho ny fandikàna ny zon'ny mpamorona ny video-nao, ary koa mifandray amin'ny Youtube milaza amin'izy ireo hoe karazana votoatin-javatra toy inona moa ilay avoakanao.
Ny làlana tsara indrindra hitarihana ny olona hijery ny video-nao miresaka Zon'Olombelona dia ny miteny amin'ny hafa momba azy: alefaso mailaka amin'ireo mpanoratra ao amin'ny Global Voices izay afaka manoratra momba ny video-nao, manorata amin'ny CitizenTube na WITNESS na mandefasa hafatra aminay rehetra ao amin'ny twitter: @citizentube, @witnessorg na @globalvoices.